Election News | NLD | Page 4
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စင်ကာပူနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Ms.Vanessa Chan Yuen ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: January 19, 2018 In: 2017 Election, Election NewsNo Comments
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၁၆ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စင်ကာပူနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Ms.Vanessa Chan Yuen ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နေ့လည်...	Read more
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း
Posted By: mygate wayon: January 06, 2018 In: 2017 Election, Election NewsNo Comments
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Riikka Laatu ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: January 05, 2018 In: 2017 Election, Election NewsNo Comments
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၅ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Riikka Laatu ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၁:၃၀ န...	Read more
ရွေးကောက်ပွဲမူဘောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ (ERCB) အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: December 20, 2017 In: 2017 Election, Election NewsNo Comments
နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် ရွေးကောက်ပွဲ မူဘောင် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အဖွဲ့ (ERCB) မှ ဦးစိုင်းရဲကျော်စွာမြင့် နှင့်အဖွဲ့အ...	Read more
Posted By: mygate wayon: December 06, 2017 In: 2017 Election, Election NewsNo Comments
နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၇ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် Asian Network for Free Elections (ANFREL) မှ Ms. Chandanie Watawala ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ န...	Read more
အိန္ဒိယ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: November 18, 2017 In: 2017 Election, Election NewsNo Comments
နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၀ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဦးလှသိန်းသည် Election Commission of India မှ Secretary Mr. Shiv Bahadur Joshi ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီ...	Read more
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွှဲကော်မရှင်ရုံး၏ သတ္တမအကြိမ်မြောက် မဟာဘုံကထိန် အလှူတော်မင်္ဂလာ ကျင်းပ
Posted By: mygate wayon: November 17, 2017 In: 2017 Election, Election NewsNo Comments
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၃၁ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွှဲကော်မရှင်ရုံး၏ မဟာဘုံကထိန် အလှူတော်မင်္ဂလာကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွှင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါ ကော်မရှင်ရုံးခန်းမဆောင်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယခုအကြိမ်...	Read more
2015 Election ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်
Posted By: Nld Officialon: October 27, 2017 In: 2015 ElectionNo Comments
2015 Election ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်
2015 Election ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်